Ethiopia waxay soo iibsatay iyada oo aan bad laheyn ilaa sided markab | Somalisan.com
Home Afsomali Ethiopia waxay soo iibsatay iyada oo aan bad laheyn ilaa sided markab
Ethiopia waxay soo iibsatay iyada oo aan bad laheyn ilaa sided markab
Ethiopia waxay soo iibsatay iyada oo aan bad laheyn ilaa sided markab waxayna kuliyada cidanka badda ka soo saartay wadayaal cusub oo dhanka maraakiibta ah kuwaas oo sanado ka hor lagu soo bandhiga dalka Djabouti
Waxayna Ethiopia ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyay ee dhismaha Ciidamada Badda dalkaasi.
Qorshahan ayaa waxaa ka dhashay hadal heyn badan maaddaama Itoobiya aysan Bad lahayn,waxa ay qabanayaan Ciidamadaas iyo waliba halka saldhiggooda noqon karto.
Wargeyska The East African ee ka soo baxa Dalka Kenya ayaa wareysi la yeeshay danjiraha Ethiopia a ee Nairobi Males Alem, kaas oo wareysigiisa ku sheegay heshiiska Dowladaha Kenya iyo Itoobiya ay ka gaareen adeegsiga Dekad laga dhisayo Lamu oo ay Itoobiya qeyb ku yeelaneyso.
Sanadkii 2018 markii ay dowladda Itoobiya shaacisay qorshaha dhismaha Ciidamada Badda ayaa Ra’isalwasaaraha Itoobiya yimid Muqdisho,waxaana heshiis ay wada galeen Soomaaliya ku jirtay adeegsiga afar ka mid ah dekadaha Soomaaliya.
Males Alem oo ka gaabsaday in uu si toos ah u sheego saldhigga Ciidanka Badda Itoobiya ayaa sheegay in adeegsiga dekadda Lamu terminal ka mid ah oo ay lahaaneyso dowladda Itoobiya uu qaban karo shaqooyin kala duwan.
Heshiiskii march 2018 Abiye iyo Uhuru ku kala saxiixdeen Adis ababa ayaa waxaa ku jirtay Dekad cusub laga dhiso Lamu taas oo Terminal ka mid ah ay si buuxda u yeelaneyso Itoobiya kana degsaneyso badeecadaha ay u baayanyihiin Dadka ku nool koofurta Dalka Itoobiya.
Khubarrada dhinaca amaanka ayaa sheegaya in Terminalka Itoobiya laga siiyay Dekadda Lamu oo lagu sheegay in ay tahay tan ugu weyn Afrika ay suuragal tahay in uu noqdo saldhigga Ciidanka Badda Itoobiya.
Kenya ayaa sheegtay in dekad leh 35 Terminal ay ka dhiseyso Lamu, mid ka mid ah Terminalladaasna lagu wareejinayo Itoobiya.
Waxaa ay sheegtay in Dekadda Lamu noqoneyso midda ugu weyn dekadaha Badweynta Hindiya, Badda cas iyo gacanka Baabal Mandab.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Casho Sharaf u fidiyey Guddigii qabanqaabada Madasha Tiknaloojiyadda ee Muqdisho
Next articleMADAXWEYNE FARMAAJO OO GARYAQAAN SULEYMAN MAXAMED U MAGACAABAY XEER ILAALIYAHA GUUD EE QARANKA
VIDEO Caruurta AGoonta Booliska Somalia Oo Mudaharaad Ka Hor Dhigay Madaxtooyada Villa Somalia
Somalisan News - March 30, 2019
Lacagtii Puntland soo sameysatay oo sababta in Banaanbaxyo iyo sicir barar ay ka kicisay...
Somalisan News - July 6, 2017
Qarax miino dhulka loogu aasay Taliyaha Saldhigga Degmada Deyniile Macalim Faarax iyo Ciidan la...
Somalisan News - January 16, 2018
Full VIDEO Mudane Madaxweyne Doone War ra’iisul wasaarahaan waa caraf-beelay, niman Hiraab la yiraahow,...
Somalisan News - September 8, 2020